Toddobaadkan waxaa lagu gartaa in laga helo warar yar oo ku saabsan Apple, wax caadi ah maadaama Kirismasku soo dhowaanayo. Waxa aan in badan ka wada hadalnay waxay ahayd Jimcihii Madoobaa oo aan ka helnay iPhone News si dhakhso leh loogu wargaliyay dhammaan wararka iyo dalabyada. Dalabyadan lama helin oo keliya illaa Jimcaha, laakiin sidoo kale kiisaska intooda badan, waa la kordhiyay illaa berri Isniinta.
Inta lagu jiro bishan, dhowr ayaa ah isbeddelada la cusbooneysiiyay ama gaaray Cydia. In Actualidad iPhone ayaan abuurnay soo uruurinta leh tweaks ugu fiican in mar hore la jaan qaada macruufka 9. Qaar ka mid ah waxay na siinayaan isla shaqooyinka sida tweaks-yada kale ee maanta aan wali la jaan qaadi karin iOS 9 maaddaama ay u muuqato in horumariyaha uu ka tagay tweak-ga. Waxaan sidoo kale daabacnay isku soo aruurinta 5 mawduucyada WinterBoard ugu fiican waa inaad isku daydaa
Isagoo ka hadlaya iPhone-ka soo socda, waxoogaa yar oo fikradaha cusub ah ayaa u muuqda kuwo la xidhiidha qaabka soo socda ee beddelaya midka hadda jira. Gaar ahaan, waxaan ku tusnay sawirrada iPhone 6k, fikrad iPhone ah oo leh kumbuyuutar jireed, oo dad badan oo jecel BlackBerry ay gacmo furan ku soo dhaweyn lahaayeen. Laakiin kama hadlin oo keliya fikradaha toddobaadkan, laakiin warar xan ah ayaa sidoo kale bilaabay inay wareegaan taas oo tilmaamaysa taas iPhone 7 ee soo socda ayaa laga yaabaa inuusan laheyn aaladda dhageysiga dhegaha.
Tan iyo markii xanta ay bilaabatay usbuucii la soo dhaafay taas oo lagu sheegay in Apple ay durbaba diyaarinayso soo saarista Apple Watch 2 cusub, wararka kaliya ee la xiriira qalabkan ayaa ina tusaya daraasad ku saabsan isticmaal ay sameeyeen dadka isticmaala Apple Watch Apple.
Ugu dambeyntiina haddii aad la socoto Black Frida, waan ku tusinaynaa liiska codsiyada la heli doono iyada oo qiimo dhimis aad u weyn la helayo illaa maanta oo Axad ah. Haddii aadan wali go'aan gaarin, ha qaadan waqti dheer haddii aad rabto inaad keydiso xoogaa yuuro ah.
Microsoft waxay dirtaa casumaadaha ugu horeeya si ay ugu tijaabiso Cortana iOS